Ho lasibatry ny Lalànan’ny filaminam-pirenena ao Hong Kong ve ny mpampianatra oniversite Taiwaney? · Global Voices teny Malagasy
Efa lasibatra ny mpikatroka sy mpampianatra ambony malaza
Voadika ny 12 Febroary 2022 4:36 GMT
Sarin'ny vavahadiben'ny Academia Sinica. Sary nandalo Wikicommons, Lysimachi (CC BY-SA 4.0)
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tao amin'ny gazetiboky an-jotra New Bloom tamin'ny 30 Janoary 2022. Navoaka indray ato amin'ny Global Voices ity dikan-teny namboarina ity noho ny fifanarahana fiaraha-miasa votoaty.
Nampangain'ny fampahalalam-baovao mpomba an'i Beijing tany Hong Kong ho nanitsakitsaka ny lalànan'ny filaminam-pirenena ao Hong Kong izay nolaniana tamin'ny Jona 2020 i Wu Rwei-Ren, mpampianatra ambony Taiwaney. Ny lalàna dia mikendry izay heveriny ho fampisaraham-bazana na fikomiana, ary nolanian'ny Kongresy Nasionalim-Bahoaka ao Shina, nanivaka ny vaomieram-panaovan-dalàna ao Hong Kong. Mpiara-miasa mpikaroka ao amin'ny Academia Sinica any Taiwan i Wu.
Lasibatra i Wu tamin'ny famoahana ny lahatsoratra “Ho an'ny Revolisiona manam-pahataperana” izay niresaka ny asan'ireo mpikatroka nandritra ny hetsika fanoherana ny famindra-toerana (fampodiana) voaheloka tao Hong Kong tamin'ny taona 2019. Navoaka tao amin'ny The Reporter, iray amin'ireo fampahalalam-baovao mpanao fanadihadiana sangany ao Taiwan, ilay lahatsoratra ary nahazo loka avy amin'ny Foreign Correspondents’ Club of Hong Kong. Izany no nitarika ny fanamelohana avy amin'ny gazety Ta Kung Pao mpomba an'i Beijing.
Wu, mpahay siansa politika avy amin'ny (fanazaran-tena), dia anisan'ny fantadazan'ny mpampianatra sekoly ambony (akademika) any Taiwan ary fantatra matetika amin'ny fandraisany anjara amin'ny hetsika ara-politika. Amin'io no mahatonga azy ho iray amin'ireo mpandinika mahery vaika ao Taiwan, amin'ny maha-mpanao teoria anarshista azy momba ny nasionalisma.
Wu Rwei-Ren. Saripika via Wikicommons, Kokuyo (CC BY-SA 4.0)
Soritana ho manohana ny fahaleovantenan'i Taiwan, izay tsy diso, i Wu. Midika zavatra maro ny famelezana an'i Wu noho ireo fanambaràny ara-politika mibaribary. Voasakana tsy mahazo miditra ao Hong Kong i Wu taloha, midika izany fa tsy hanandrana hiditra ao Shina na Hong Kong izy ato ho ato. Amin'io lafiny io, na dia mihatra maneran-tany aza ny lalàna momba ny filaminam-pirenena ao Hong Kong, tsy dia misy fomba firy hampiharan'ny governemanta Shinoa izany any ampitan-dranomasina.
Tao amin'ny fanehoan-kevitra, nanamaivana ny maha-zava-dehibe azy i Wu, ary nanasongadina ny zava-nitranga taloha izay tsy maintsy nitadiavany fiarovana noho ny fandrahonana Shinoa. Fanampin'izay, nentin'i Wu ny zavamisy fa raha natao tsy ampiharina talohan'ny nampanankery azy ny lalànan'ny fiarovam-pirenena ao Hong Kong tamin'ny voalohany, kanefa dia natao izany hanenjehana ireo mpikatroka nitady hiaro ny fahalalahana demaokratikan'i Hong Kong. .
Tsy i Wu irery no lasibatra mikasika ny fijoroan'izy ireo momba an'i Hong Kong. Tamin'ny Novambra 2020, narahin‘ny gazety mpomba an'i Beijing toa ny Ta Kung Pao sy Wen Wei Po maso akaiky i Lee Ching-Kwan, talen'ny Global China Center ao amin'ny Oniversiten'ny Siansa sy Teknolojia ao Hong Kong. Nitranga izany noho ny fanehoan-keviny milaza fa “an'izao tontolo izao i Hong Kong”, izay soritan'ny gazety ho mpanohana ny fahaleovantena sy fanitsakitsahana ny lalànan'ny filaminam-pirenena.
Ny hetsika ataon'ny gazety mpomba an'i Beijing hamelezana ny mpampianatra sekoly ambony dia tahaka ny ikendrena hampitsaharana ny lahateny akademika sy media ao Hong Kong. Na izany aza, ho an'ny olona tsy avy any Hong Kong, dia sarotra ihany ny hoe ho voakendrin'ny tifitra mivantana tahaka ireo Hongkongers ry zareo.
Ny tobin'ny Tafi-Panafaham-Bahoaka ao Hong Kong. Saripikan'i ExploringLife via Wikicommons (CC BY-SA 4.0)
Toy izany koa no nitranga rehefa nanambara ny fepetra iadiana amin'ireo mpiaro ny fahaleovantena Taiwaney ny governemanta Shinoa tamin'ny herintaona, noho ny tsy fahafahana manao ho lasibatra izay rehetra rehetra manohana ny fahaleovantenan'i Taiwan, nanao fanambaràna ny governemanta Shinoa mandrara ireo mpanao politika malaza ao amin'ny DPP (Antoko Demaokratika Liam-pandrosoana ao Taiwan) toa ny praiminisitra Su Tseng-chang, ny filohan'ny mpanao lalàna Yuan Yu Shyi-kun, ary ny minisitry ny raharaham-bahiny Joseph Wu, sy ny fandrarana azy ireo sy ny havany tsy hanao raharaham-pihariana any Shina.
Mbola tsy mazava amin'izao fotoana izao raha mety mikendry ireo Taiwaney monina ao Hong Kong ny governemanta Shinoa mba hanaovana azy ireo ho ohatra. Efa nisy aloha ny fakana an-keriny Taiwaney tao Shina noho ny fomba fijeriny ara-politika na ny fikatrohana taloha, ny tranga malaza indrindra dia ilay mpiasan'ny FTMF momba ny zon'olombelona Lee Ming-che.
Mandritra izany fotoana izany, hita ho miharatsy kokoa ny toe-draharahan'ny zon'olombelona ao Hong Kong amin'ny fanendrena ny Mazaoro Jeneraly Peng Jingtang ho komandin'ny toby miaramilan'ny Tafi-Panafaham-Bahoaka ao Hong Kong. Efa lehiben'ny mpiasa tao amin'ny faritanin'i Xinjiang i Peng, ary izy no manamboninahitra ambony indrindra voatendry amin'io toerana io.
Matetika ny governemanta Shinoa no mihevitra ny olan'i Tibet, Taiwan, Hong Kong, ary Xinjiang ho mifandray noho ny antso an-kolaka ho amin'ny fahaleovantena. Mazava fa ny fanendrena an'i Peng ao Hong Kong dia famantarana fa fampitahorana ilay hafatra, raha jerena fa ao Xinjiang, Uyghurs maherin'ny iray tapitrisa no voatazona any amin'ny toby noho ny fivavahany. Milaza ny governemanta Shinoa fa miara-miasa amin'ireo mpisehatra vahiny ny hery mpisintaka ao Xinjiang ho fiezahana sy hanimba an'i Shina, fiampangana iray izay miitatra any Hong Kong ihany koa.
Nitranga ity famindran-toerana ity taorian'ny fanenjehana tsy mbola nisy toa izany ny haino vaky jery izay niafara tamin'ny fanakatonana ireo sehatra fampahalalam-baovao an-jotra Stand News, izay nisamborana ireo mpikambana ao amin'ny birao farany sy taloha. Mampiseho izany fa mety hitohy ny famoretana ara-politika ao Hong Kong.